Taona 2019 2020 2021
Catégorie ActualitéUncategorized @mg
Fomba fijery ny maha zavadehibe ny Kôngresy IUCN. https://civicrm.iucn.org/civicrm/mailing/view?reset=1... https://www.youtube.com/watch?v=cEFsy490NRs
Jereo lahatsoratra +
Fampisongadinana ny harena voajanahary
Mba hampisongadinana ny harena voajanahary ao Bobaomby, Faritra DIANA ary mba hamporisihana…
Filazana hoan’ireo mpitondra tetikasa
Filazana hoan’ireo mpitondra tetikasa liana amin’ny FIANTSOANA TETIKASA FAMATSIAM-BOLA TANY MEVA 2021-2022.…
FIANTSOANA TETIKASA FAMATSIAM-BOLA –…
Ny Fondation TANY MEVA, dia mamatsy vola tetikasa eny ifotony ho amin’ny…
Fitrandrahana ara-drariny ny harena…
Ny mponina ao Anjiabe, tanana kely ivon’ny atialan’ny Bobaomby, Faritra DIANA dia…
Fameranana amin’ny laoniny nny…
Honko "avincenia marina" an’aliny no nambolena tao amin’ny Baie de Bombetoka. Ny…
Nanangana vondrona miady amin’ny…
Ny mponina ao amin’ny fonkotany Ambongamaranitra, kaominina Andranofasika, distrikan’ny Ambato Boeny dia…
Fiarovana ny sokatra Angonoka…
Fanajariana ala honko
Ny mponina ao Anjiamaloto dia mirotsaka an-tsehatra amin'ny fiarovana ny ala honko…
Hetsika fambolen-kazo ny Fondation…
Ny 21 desambra 2020 dia nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny taom-pambolen-kazo ho…
Tahala Meva: hanana ivotoerana…
Ny Fondation Tany Meva dia nametraka ivotoerana fanovozam-pahalala sy fahaizamanao hoan'ny fiarahamonina…
Fitsidihana tetikasa tohanana
Nitsidika tetikasa miisa 15 ireo mpikambana ao amin'ny filakevim-pitatanan'ny Fondation Tany Meva.…
Fiofanana momban’ny taridalana ny…
Namory ireo mpiaramiombonantoka sy mpampiroborobo tetikasa "Larges Grants" miasa amin'ny faritra manan-danja…
Angovo Madio hoan’ny mponina…
Notokanana ny 28 Novambra 2020 teo ny picocetrale mpamokatra herinaratra ao Amberivery,…
Famatsian-drano fisotro madio any…
Manohana ny fananganana efitrano fianarana sy famatsian-drano fisotro madio ao amin'ny distrika…
Tetikasa rano fisotro madio
Misy tetikasa famatsiana rano fisotro madio izay miatomboka ao amin'ny faritra Atsimo-…
Fanarenana ny faritra arovana…
🌳 Fantatrao ve?👉 Any Betsiboka no be ala honko indrindra eto Madagasikara.📌…
Andao hankalaza ny ala…
Amin'ity 26 Jolay ity, ny Andro Iraisam-pirenena honko, ny fiarovana ny natiora…
Tandidonin-doza amin'ny fihazana ny soka-dranomasina ao amin'ny eladranon'ny Rigny any Antsiranana. Manoloana…
Zavamaniry miisa 7000 ao…
Zavamaniry miisa 7000 mahery no voavoly ao amin'ny faritra arovana vaovao any…
Fiarovana ny zava-boajanahary amin’ny…
Fiarovana ny zava-boajanahary amin'ny alàlan'ny ecotourism ao amin'ny tanànan'i Ampombofofo "tetikasa tohanan'ny…
Volan’ny natiora: manavao ny…
Antananarivo, 4 Jona 2020 - fankalazana ny tontolo iainana maneran-tany dia isaky…
Andao hankalaza ny Andro…
Ny fikajiana ny tontolo iainana dia iray amin'ireo lohahevitry ny famatsiam-bola ny…
Tratry ny tontolo tontolo…
"Ny Fotoan'ny Natiora" no toninan'ity fankalazana ity. Ny Fondation Tany Meva dia…
Mitohy hatrany ny asa
Mitohy hatrany ny fanatanterahana ny asa eo anivon'ny Fondation Tany Meva ao…
Manasa-dalana ny fanatanterahana ny…
Manasa-dalana ny fanatanterahana ny fandaharan'asa tohanan'ny Fonds de partenariat pour les écosystèmes…
Fihaonana faha-51 an’ny filankevi-pitantanan’ny…
Nandray anjara tamin'ny fihaonana faha-51 an'ny filankevi-pitantanan'ny Institution Financière Régionale de l’Anosy…
Fomba fijery ny maha zavadehibe ny Kôngresy IUCN. https://civicrm.iucn.org/civicrm/mailing/view?reset=1…
Mba hampisongadinana ny harena voajanahary ao Bobaomby, Faritra DIANA ary mba hamporisihana ny mponina eny manodidina mba hiaro io tontolo iainana io, ny Fondation Tany Meva amin’ny alalan’ny famatsiam-bola CEPF dia namatsy ny fametrahana faritra maitso ao amin’ny vohitr’Anjiabe. Ny ONG BNC, panatontosa ny tetikasa, dia maniry ny hitondrana vahana vaovao eny ifotony eo amin’ny tontolo ara sosialy sy ekonomika. Mba hanomanana ny vondron’olona ifotony amin’io hetsika vaovao io, nisy ny fanamafisana ny hay tao eo amin’ny foto-kevitra miompana manokana amin’ny fizahantany tahaka ny fitarihan-dalana, ny lakozia ary ny teny vahiny.
Filazana hoan’ireo mpitondra tetikasa liana amin’ny FIANTSOANA TETIKASA FAMATSIAM-BOLA TANY MEVA 2021-2022.
Tany Meva dia mampahafantatra fa misy ny fampahafantarana momba io fiantsoana tetikasa io, izay voasoratra ao amin’ny Rijantenin’Andraikitra faha 10. Izany dia hatao amin’ny alalan’ny « visioconférence » ny alakamisy 22 aprily 2021 amin’ny 9 ora.
Izay liana dia iangaviana hisoratra anarana amin’ny rohy manaraka : https://bit.ly/3dsVDus
Misaotra amin’ny fandraisanao anjara !
FIANTSOANA TETIKASA FAMATSIAM-BOLA – TANY MEVA – TAONA 2021-2022
Ny Fondation TANY MEVA, dia mamatsy vola tetikasa eny ifotony ho amin’ny fampandrosoana lovainjafy mifandraika amin’ny lohahevi-dehibe efatra voafaritra ao anatin’ny paikadiny fahaefatra.
Faritra telo ambin’ny folo (13) eto Madagasikara no voakasik’ity fiantsoana tetikasa ity. Izany dia misokatra ho an’ireo Vovonana/Federasion’ny Vondron’Olona Ifotony, Fikambanana, Kaoperativa, Ivon-toeram-pikarohana/fanofanana, Sehatra tsy miakina ka mijoro ara-dalana sy ara-panjakana.
Koa izay liana rehetra dia asaina haka ny andinindininy momba ity fiantsoana tetikasa ity ao anatin’ny tranokala https://tanymeva.org/nos-appel-a-projet/. Raha mila fanazavana fanampiny dia amporisihana handefa ny fanontaniany ao amin’ny adiresy mailaka appel@tanymeva.org.
Ny mpitondra tetikasa dia amporisihana hanatitra an-tanana ny antotan-taratasiny araka ny voasoritra ao anatin’ny Rijantenin’Andraikitra ary atao anaty valopy mihidy amin’ny adiresy « Fondation Tany Meva Ambatobe, Lot I A I 1 bis – Ambatobe 103 Antananarivo » farafahatarany ny Alatsinainy 31 May 2021 amin’ny 11 ora atoandro.
Fitrandrahana ara-drariny ny harena voajanahary
Ny mponina ao Anjiabe, tanana kely ivon’ny atialan’ny Bobaomby, Faritra DIANA dia mihary amin’ny alalan’ny famokarana ara-dalàna ny arina fandrehatra amin’ny alalan’ny hazo Mokonazy. Ny fandrindrana ny filàn’ny mponina miaraka amin’ny asa fitandroana dia nandrisika ny Fondation Tany Meva mba hamatsy vola io tetikasa izay notontosain’ny ONG MAVOA io. Io tetik’asa io dia mivoy ny fanaraha-maso ny harena voa-janahary mba ho fanondranana ara-drariny sy tompon’andraikitra amin’ny famokarana arina fandrehatra. Nisy ny fametrahana aro-afo, ny fisafoana ati-ala ary ny fampitaovana eo anivon’ny vondron’olona ifotony.
Fameranana amin’ny laoniny nny ala honko ao Bombetoka
Honko “avincenia marina” an’aliny no nambolena tao amin’ny Baie de Bombetoka. Ny tahan’ny fanjariana dia mahatratra 90%. Faly ny mponina anatiny satria nahatsapa ny tombotsoan’ny fanarenana sy ny fiarovana ny ala honko toy ny fiverenan’ny harena an-dranomasina tahaka ny drakaka. Ny fanangonana ny zana-dandy ao amin’io karazana Honko io sy ny famadihana azy ho lasa landy dia manatsara ihany koa ny fidiram-bolan’ny mponina. Ny tetik’asa dia tohanan’ny fondation Tany Meva izay iarahana miasa amin’ny Fikambanana Tafita izay ao anatin’ny tetikasan’ny CEPF.
Nanangana vondrona miady amin’ny afo ny ao amin’ny fokontany Ambongamaranitra
Ny mponina ao amin’ny fonkotany Ambongamaranitra, kaominina Andranofasika, distrikan’ny Ambato Boeny dia nandray ny andraikiny manoloana ny fitomboan’ny dorotanety. Natsangana ny komity misahana ny afo izay nahafahana nanena ny fitomboan’ny dorotanety. Mba hanamafisana ny fahatomombanan’ny fanarenana ny ala eny an-toerana dia nirotsaka an-tsehatra ny mponina mba hametraka ny fiarovana ny afo izay an-kilaometatra maro. Ny tetik’asa dia tohanan’ny fondation Tany Meva amin’ny alalan’ny Fikambanana Tafita izay ao anatin’ny tetikasan’ny CEPF.
Fiarovana ny sokatra Angonoka ao amin’ny eladranon’ny Baly
Ny mponina ao Anjiamaloto dia mirotsaka an-tsehatra amin’ny fiarovana ny ala honko ao amin’ny faritra avaratra atsinanan’ny distrikan’i Soalala, faritra Boeny. Izany dia vokatrin’ny tetikasa ” fandraisana anjara amin’ny fitantanana maaharitra ny ala honko amin’ny alalan’ny fampiroboroboana ny fizahan-tany ao amin’ny eladranon’ny Baly sy fanatsarana ny farim-piainanan’ny mponina eny ifotony”. Ny fondation Tany Meva no mahonana ny tetikasa amin’ny alalan’ny famatsiam-bolan’ny CEPF
Hetsika fambolen-kazo ny Fondation Tany Meva
Ny 21 desambra 2020 dia nanokatra tamin’ny fomba ofisialy ny taom-pambolen-kazo ho an’ny taona 2020/2021 ny Fondation Tany Meva. Zana-kazo 30 000 eo ho eo no hovolena mandritra ity vanim-potoana ity. Namonjy ny toeram-pambolen-kazo ao Ankarabe/Manerinerina, kaomina ambanivohitra Tsaramasoandro, distrikan’Ankazobe ny ekipan’ny Tany Meva hanamarihana izany hetsika izany. Ny vondron’olona ifotonyy avy amin’ireo vohitra efatra manodidina dia entanina sy handray anjara ihany koa amin’ny famerenana ny ala ao an-toerana. Hifarana amin’ny tapany faharoa amin’ny volana febroary 2021 ity hetsika ity izay iarahana sy handraisan’ny manampahefana ao an-toerana sy ny mpikambana ao amin’ny filankevi-pitantanana ny Fondation Tany Meva anjara.
Tahala Meva: hanana ivotoerana fanovozam-pahalala sy fahaizamanao hoan’ny fiarahamonina
Ny Fondation Tany Meva dia nametraka ivotoerana fanovozam-pahalala sy fahaizamanao hoan’ny fiarahamonina ao Toliara (Tahala Meva) Natao izany mba hanamafisana ny traikefan’ny Vondron’Olona Ifotony (VOI) amin’ny fitantanana harena voajanahary,
Ny 12 sy 13 octobre 2020, dia nisy ny atrikasa fakan-kevitra izay notanterahina tao amin’ny Pavé Antinarenina, fiaraha-miasa miaraka amin’ny Hay Tao USAID. Nandritra ny atrikasa dia nisy ny fandraisana anjaran’ny fiarahamonim-pirenena Atsimo Andrefana, Botanique de Tuléar, ny fikambanam-behivavy FIVEMI avy ao St Auguustin sy ny Federasionan’ny Mpanjono Milanoriake avy ao Anakao.
Nitsidika tetikasa miisa 15 ireo mpikambana ao amin’ny filakevim-pitatanan’ny Fondation Tany Meva. Faritra telo manerana ny nosy no misy ireo tetik’asa ireo: Vakinankaratra, Menabe et Atsimo Andrefana. Naharitra 14 andro ny fidinana an-toerana nanatan-teraka izany. Ity fitsidihana ity dia ao anatin’ny politikan’ny Fondation ary ampahany amin’ny fizotran’ny fanavaozana stratejika ny drafitra stratejika fahadimy, izay manan-kery amin’ny 2021.
Fiofanana momban’ny taridalana ny tsenam-barotra izay tarihin’ny RIT – MADIO
Namory ireo mpiaramiombonantoka sy mpampiroborobo tetikasa “Larges Grants” miasa amin’ny faritra manan-danja ho harena voanajanahary ny RIT-MADIO (CEPF – Madagascar). Nandritra izany dia nisy ny fiofanana momban’ny taridalana sy fepetra tsy maintsy arahina momban’ny tsenam-barotra izay misy eo anivon’ny CEPF.
Angovo Madio hoan’ny mponina oa Amberivery sy Anolakely
Notokanana ny 28 Novambra 2020 teo ny picocetrale mpamokatra herinaratra ao Amberivery, ao amin’ny distrikan’i Bealanana, Faritra Sofia. Io no toby famatsiana herinaratra fahafolo izay tohanan’ny Fondation Tany Meva hatramin’ny 2008.
Fianakaviana 213 manodidina ny faritra arovana vaovao any Bemanevika (Amberivery sy Anolakely) no mahazo tombony amin’ity angovo madio ity. Ny fiarovana ny ala izay miteraka rano no ahafahana nametraka ny io toby famatsiana herinarata io.
Mpiaramiombonantoka: #ADER/MEH, #PNUD (projet MRPA), #The_PeregrineFund, #AIDER
Famatsian-drano fisotro madio any Beroroha Est
Manohana ny fananganana efitrano fianarana sy famatsian-drano fisotro madio ao amin’ny distrika ny Betioky Est ny Fondation Tany Meva. Ny fikambanana Milavonjy no manatanteraka ny asa, tafiditra ao anatin’ity tetikasa ity ihany koa ny fanohanana famokarana anana izay miteraka loharanom-bola hoan’ny vondron’olona ifotony.
Misy tetikasa famatsiana rano fisotro madio izay miatomboka ao amin’ny faritra Atsimo- Andrefana, kaominina Beroroha Est. Ny fondation Tany Meva no nanome famatsiam-bola ary ny fikambanana Miarina no manatanteraka ny asa.
Fanarenana ny faritra arovana vaovao ny helodranon’i Bombetoka
🌳 Fantatrao ve?
👉 Any Betsiboka no be ala honko indrindra eto Madagasikara.
📌 Mba hiarovana ny mety ho fahapotehana hahazo an’io faritra io dia mandray an-tanana amin’ny fanarenana ny faritra arovana vaovao ny helodranon’i Bombetoka amin’ny fambolena honko Avicennia marina ny fikambanana Femmes Entrepreneurs Environnementales Mahajanga (FEEM) izay tohanan’ny Fondation Tany Meva sy CEPF.
Mampiavaka io karazana honko io dia itoeran’ireo biby landy izay anisan’ny miteraka loharanom-bola hoan’ny mponina amin’iny faritra iny.
Andao hankalaza ny ala honko ity 26 Jolay!
Amin’ity 26 Jolay ity, ny Andro Iraisam-pirenena honko, ny fiarovana ny natiora dia tena ratsy kokoa satria mandalo amin’ny krizy ara-pahasalamana izay avy amin’ny fahapotehana ny natiora ary mifandray mivantana na tsy mivantana amin’ny bibidia. . Na eo aza ity areti-mifindra ity dia nankalazaina ity andro ity mba hampirisihana ny ezaka maharitra izay ataontsika ho an’ny honko. Ankehitriny, 236 400 ha eo ho eo no manarona ny morontsirak’i Madagasikara, izay mampiseho 2% ny ala honko manerantany. Ny ala honko no fonenan’ny karazana zavamaniry sy karazana biby tsy manam-paharoa mampiavaka an’i Madagasikara. Mamokatra eo anelanelan’ny 2,5 sy 3.9 taonina isan-kilaometatra toradroa isan-taona izy ireo, manome fivelomana amin’ny mpiray tanindrazana maro ary mampiavaka ny tanintsika. Ho an’i Dannick Randriamanantena ho an’i WWF, dia “ekosistemika toy ny ala honko sy haran-dranomasina izay mampanan-karena ny morontsiraka andrefan’i Madagasikara. Ho an’ny toekarentsika sy ny mahasoa ny vahoaka Malagasy, dia maniry ny hitahiry ireo loharanom-piainana isika », hoy ihany izy.
Nisy ny fandalinana natao momba ny drafitra ara-dalàna sy politika momba ny ala honko any amin’ny firenena fito anisan’izany i Madagasikara izay novolavolaina tamin’ny alàlan’ny Initiative “Andiany honko ankehitriny!” “, Amin’ny fiaraha-miasa amin’ny fiaraha-miasa sy fampandrosoana ara-toekarena (BMZ), ny Iraisam-pirenena ho an’ny fiarovana ny natiora (IUCN) sy ny WWF. Io tanjona io dia mikendry ny hanamafy ny fitantanana ny tontolon’ny ala honko mba hampihena sy hanakanana ny fandringanana azy.
Tamin’ity taona ity, ny andro iraisam-pirenena amin’ny fikajiana ny tontolo iainana honko dia marika amin’ny fiakarana amin’ny alàlan’ny fantsom-pifandraisana amin’ny onjam-peo sy amin’ny tambajotra sosialy manerana an’i Madagasikara. Ireo fiaraha-mientana ireo dia tarihan’ny fikambanana eo an-toerana na isam-pirenena miaraka amin’ireo talen’ny faritra ao amin’ny Ministeran’ny tontolo iainana sy fampandrosoana maharitra ary ny ministeran’ny fambolena, fiompiana sy fanjonoana. Initiatives notohanan’ny mpisehatra amin’ny fitehirizana ny ala honko eto Madagasikara ao anatin’izany ny WWF.
Lahatsoratra: WWF Madagascar
Tandidonin-doza amin’ny fihazana ny soka-dranomasina ao amin’ny eladranon’ny Rigny any Antsiranana.
Manoloana izany dia nametra tetikasa fiarovana atao hoe: Fandraisana anjara amin’ny fampiainana sy fiarovanany soka-dranomasina” ny ONG Soameva izay tohanan’ny Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF). Ny tetikasa dia manamafy ny fikajiana ny sokatra anaty ranomasina amin’ny alalan’ny fampandraisana andraikitra ny vondrom-piaraahamonina sy ireo manam-pahefana.
Zavamaniry miisa 7000 ao Ambohitr’Atsingy,
Zavamaniry miisa 7000 mahery no voavoly ao amin’ny faritra arovana vaovao any Ambohitr’Atsingy, Montagne des Français – Antsiranana.
Izany no tanteraka dia noho ny fampandraisana anjara ireo vondron’olona eny ifotony amin’ny fikarakarana ny harena voajanahary amin’ny alàlan’ny tetikasan’ny Arche aux Plantes izay tohanan’ny CEPF: “mampiofana ary mampiditra ireo vondrom-piarahamonina amin’ny hetsika famerenana ny ala”
Fiarovana ny zava-boajanahary amin’ny faritra Antsiranana
Fiarovana ny zava-boajanahary amin’ny alàlan’ny ecotourism ao amin’ny tanànan’i Ampombofofo “tetikasa tohanan’ny Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) notarihin’i Bobaomby Nature Conservation (BNC) ao amin’ny faritra DIANA. Nisy fiofanana ara-teknika sy ara-bola nomena natao hanohanana ny ekipan’ny BNC ho fanombohana ny tetikasa.
Volan’ny natiora: manavao ny fanekentsika ny tontolo iainana!
Antananarivo, 4 Jona 2020 – fankalazana ny tontolo iainana maneran-tany dia isaky ny 5 jona amin’ny taona ho an’ny fahatsiarovan-tena sy hetsika maneran-tany hiarovana ny tontolo iainana. Amin’ity taona ity dia ny lohahevitry ny zavamananaina no ho fototry ny fifanakalozan-kevitra, miaraka amin’ny teny filamatra hoe “ny fotoan’ny natiora”.
Nankalazaina nandritra ny fankalazana ny faha-60 taonan’ny fahaleovantenan’i Madagasikara, izay nohamafisin’ny vanim-potoanan’ny krizy ara-pahasalamana sy ny andro maneran-tany ho an’ny natiora, ny fankalazana an’ity andro ity dia handray fiovana miavaka rehefa maneho ny fiarovana ny zavamananaina. Eo ambany fitarihan’ny minisiteran’ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra ary amin’ny fiaraha-miasa amin’ny fikambanana fiarovana toy ny Conservation International (CI), Fototry ny faritra arovana eto Madagasikara (FAPBM), Tany Meva Foundation, Madagascar National Parks (MNP), Fikomiana momba ny fiarovana ny biby (WCS) sy ny World Wide Fund (WWF), “volana voajanahary” dia manasa antsika hisaintsaina ny ho avin’ny zavamananaina eto Madagasikara amin’ny taona ho avy sy ny fanimbana ny tontolo voajanahary.
Mandritra ny iray volana, dia manolotra maherifo an’ny natiora isika izay hampiseho fa misy lehilahy sy vehivavy lehibe manerana ny nosy izay miady mba hamonjy ny Planet. Misy koa ny sary an-tsary momba ny mombamomba ny Facebook hoe “volana natiora” azo alaina amin’ny 5 jona. Ny mpampiasa Internet dia asaina handray anjara amin’ny tontolo manokana # 30daysChallenge amin’ny tambajotra sosialy miaraka amin’ny tenifototra #HoAnNatiora sy # Connect2Earth ary hizara horonan-tsary momba ny fanambin’izy ireo mandritra ny volana jona.
Baomivotse Vahinala Raharinirina, minisitry ny tontolo iainana sy fampandrosoana maharitra: zavaboary, ho tombontsoan’ny olombelona sy ny zavamiaina rehetra eto ambonin’ny tany. Mikatsaka ny firaisankina sy ny fiaraha-miasa amin’ny ambaratonga rehetra izahay. Andao isika hirotsaka an-kery satria io no tokana tokana amin’ny hoavy, hiaina mifanaraka amin’ny natiora. “
Tsarovy fa manerantany, ny natiora dia manome tolotra mitentina $ 125 miliara isan-taona, raha manampy amin’ny fiantohana ny famatsiana rivotra madio, rano madio, sakafo, angovo, zava-mahadomelina ary vokatra sy fitaovana hafa. (Tatitra momba ny planeta miaina 2018). Tandindonin-doza ny maha-zava-boajanahary an’i Madagasikara: ny tsindry vokatry ny asa ataon’olombelona toa ny fandripahana ny tany, ny fandotoana, ny fihoaram-pefy, ny fiovan’ny toetr’andro, ny fangalinana sns. mahatonga ny biodiversity hanjavona amin’ny tahan’ny manaitra. Eto Madagasikara, noho ny fepetra famonoana hisorohana ny fiparitahan’ny COVID-19, mihamitombo ny tsindry eny amin’ireo faritra arovana ary noho izany dia mihamitombo ny tahan’ireo heloka bevava amin’ny tontolo iainana: doro afo, poaching, kolikoly noho ny fitrandrahana tsy ara-dalàna. harena voajanahary. Madagasikara, tahaka ny firenena maro eto amin’izao tontolo izao, dia ho afaka hanentana an-tserasera amin’ny Nature, na dia eo aza ny krizy ara-pahasalamana mifandray amin’ny COVID-19. Hiaraha-manandratra ny feontsika isika ary asehontsika fa manisa ny natiora, andao isika hiara-hiasa ary hamily ny lela fatiantoka ny natiora!
Andao hankalaza ny Andro iraisam-pirenena ho an’ny zavamananaina anio!
Ny fikajiana ny tontolo iainana dia iray amin’ireo lohahevitry ny famatsiam-bola ny Fondation Tany Meva. Miaraka amin’ireo mpiara-miasa aminy, indrindra ny CEPF, ireo karazana tandindona sy tandindonin-doza toy ny dugong sy baobabs dia arovana tsara kokoa. Eto Madagasikara, miankina betsaka amin’ny harena voajanahary ny mponina mba hahavelona azy. Mba hampihenana ny tsindry amin’ny zavamananaina, ny Fondation Tany Meva dia manohana tetikasa iraisana amin’ny fiezahana mitady fifandanjana eo amin’ny paikady fiarovana sy fanatsarana ny fari-piainan’ny vondron’olona. Ny tanjon’ireo tetik’asa ireo dia ny hanohy ny loharanom-bola hafa azo raisina (matihanina ny sehatra nampanantenaina, fizahan-tany, asa-tanana, sns) sy ny fananganana fotodrafitrasa fampandrosoana (fofom-bomba hydro, fambolena, angovo azo havaozina, sekoly, sns).
Tratry ny tontolo tontolo iainana !
“Ny Fotoan’ny Natiora” no toninan’ity fankalazana ity.
Ny Fondation Tany Meva dia manohana ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra amin’ny alàlan’ny famatsiam-bola tetikasa izay mahasoa ireo vondron’olona. Tamin’ity taona ity dia nanapa-kevitra i Madagasikara fa hanokana ny volana Jona ho an’ny natiora.
Eo ambany fitarihan’ny minisiteran’ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra (Medd Madagascar), amin’ny fiaraha-miasa amin’i Tany Meva sy ireo fikambanana fiarovana hafa toa ny Conservation International – Madagascar (CI), ny fototra ho an’ny arovana arovana sy ny maha-biodiversité Madagasikara (FAPBM), Pariam-pirenena Madagascar (MNP), WCS Madagascar (WCS) ary WWF Madagascar (WWF), ny “Volana voajanahary” dia manasa antsika hisaintsaina ny ho avin’ny zavaboary eto Madagasikara amin’ny taona ho avy. ary ny fahasimban’ny tontolo voajanahary.
Ianao koa dia mandray anjara amin’ny hetsika fanairana amin’ny alàlan’ny fametrahana ny haingo amin’ny rohy https://bit.ly/30jJPof ao amin’ny mombamomba anao Facebook. Raha mila fanazavana fanampiny dia jereo ny rohy: https://bit.ly/3dB48Rv
Mitohy hatrany ny fanatanterahana ny asa eo anivon’ny Fondation Tany Meva ao anatin’ny fanajana ireo fepetra ara-pahasalamana mba ho fiarovana ny rehetra.
Andro sy ora fisokafana:
*** Foibe Ambatobe – Antananarivo: alatsinainy, alarobia ary zoma amin’ny 7 ora 3 0minitra ka hatramin’ny 3 ora.
*** Tahala Meva – Toliara: alatsinainy ka hatamin’ny zoma mmanomboka amin’ny 8 ora ka hatramin’ny 4 ora sy sasany.
Manasa-dalana ny fanatanterahana ny fandaharan’asa tohanan’ny Fonds de partenariat pour les écosystèmes critiques (CEPF
Manasa-dalana ny fanatanterahana ny fandaharan’asa tohanan’ny Fonds de partenariat pour les écosystèmes critiques (CEPF) amin’ny faritry Madagasikara sy ny ny nosy amin’ny ranomasimbe Indianina (MADIO). Nisy ny atrik’asa momban’ny fandaharan’asa izay natao tao aminn’ny Hotel Carlton Madagascar ny 3 hatamin’ny 5 desambra 2019. Nanomboka tamin’ny 2015 dia maherin’ny 10,5 Millions dolara ny vola nampiasaina, ny 57% amin’izany dia teto Madagasikara. Ankehitriny dia noraisina an-tanana ny fandraisana anjara amin’ny fiarovana faritra 72 misy harena voajanahary izay tadidonin-doza.
Fihaonana faha-51 an’ny filankevi-pitantanan’ny IFRA
Nandray anjara tamin’ny fihaonana faha-51 an’ny filankevi-pitantanan’ny Institution Financière Régionale de l’Anosy (IFRA) androany tao Fort-Dauphin ny Fondation Tany Meva
Journée mondiale de l’environnement (JME) – Palais des Sports Mahamasina
Date limite d’envoi des dossiers dans le cadre de l’appel à projets des régions du Sud
D'après une étude de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (IUCN), ce sont plus de 20 000 espèces de plantes et animaux qui…
Alors que plus personne aujourd'hui ne songe à remettre en cause l'importance de la diversité biologique pour le présent et pour les générations futures, certaines…